Coral Disease | Reef Resilience
Ny fihanaky ny areti-mifindra dia loza mitatao ho an'ny haran-dranomasina, ka mahafaty ny vatohara mafy sy malefaka amin'ny faritra midadasika. Mety mila maminavina sy mampita ny fiantraikany ara-tontolo iainana, mandrefy ny fiantraika, ary mahatakatra ny fiantraikan'ny fihanaky ny aretina ho an'ny fitantanana maharitra ny faharetan'ny haran-dranomasina ireo mpitantana miatrika ny fihanaky ny areti-maso.
Ny drafi-pandrenesan'ny aretin'ny haran-dranomasina dia mamaritra ny dingana hamantarana, fanombanana ary famaliana ny fipoahana. Satria miankina amin'ny fifindran'ny aretina ny fihanaky ny aretina, ny mpitantana dia mety hifantoka amin'ny fidirana amin'ny fifindrana aretina. Ny aretina dia mety hiparitaka haingana amin'ny alàlan'ny ekôsistema haran-dranomasina, fa ny fihanaky ny aretina dia mety maharitra mandritra ny volana ka hatramin'ny taona maro. Midika izany fa ny fanaraha-maso ny valin'ny aretina dia mety mila maharitra mandritra ny volana maro na taona maro mihitsy aza.
Sahala amin'ny drafitry ny valin'ny fanafoanana, ny karazana sy ny haben'ny drafitra dia mety miovaova be arakaraka ny tranokalanao sy ny fahafaha-manao. Ny fanekena sy ny famantarana ny aretin'ny haran-dranomasina dia tena zava-dehibe amin'ny valin'ny aretina mahomby, ary any amin'ny toerana maro dia mety mila miantehitra amin'ny fahaiza-manao manokana ny mpitantana ny haran-dranomasina na mety maniry ny hampihatra fandaharan'asa hananganana fahaiza-manao amin'io faritra io. Soa ihany fa misy mpitari-dalana sy fitaovana tena tsara (ohatra, misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRaymundo et al. 2008manokatra fisie PDF ) hanampy amin'ny famantarana sy ny fitantanana ny aretin'ny haran-dranomasina.
Fanamarinana sy fanaraha-maso
Raha misy loharanon-karena, ny mpitantana dia afaka manatanteraka fanombanana ny aretina amin'ny antsipiriany. Ny fanombanana toy izany dia ahitana ny fandrefesana ny karazam-biby mora voan'ny aretina, ny fihanaky ny aretina (izany hoe ny ampahany amin'ny haran-dranomasina voakasik'izany), ary ny famaritana ny ratra amin'ny haran-dranomasina voakasika. ref Ny famakafakana mikrobiôlôjika, molekiola ary histôlôjika koa dia azo atao, mitaky fanangonana santionany amin'ny haran-dranomasina sy ny tontolo iainana.
Fanadihadiana haran-dranomasina marary any St. Croix, Nosy Virijiny Amerikana. Sary © John Melendez
Raha vantany vao mamaritra ny fepetra "baseline" ny mpitantana, dia azo atao ny fanombanana izay maneho ny haavon'ny aretina mihoatra ny mahazatra sy ny mety ho fahafatesan'izy ireo. ref Ireo teknika sy paikady maro ampiasain'ny mpitantana dia aseho eto ambany.
Ny hetsika fitantanana mivantana ny fanalefahana ny aretina dia mety ho azo atao amin'ny trangana aretina vitsivitsy. ref Ohatra, nisy fahombiazana sasany tamin'ny fanaraha-maso ny fihanaky ny areti-mifindra mainty mandritra ny tsy fahampian'ny hafanana amin'ny alàlan'ny fametahana ny bandy amin'ny fampiasana syringe na paompy lehibe. Avy eo dia azo apetraka mivantana eo ambonin'ilay bandy ny tanimanga na epoxy putty anaty rano mba hampitsaharana ny fitomboan'ny cyanobacterial tavela ao amin'ny taolam-paty ambanin'ny vatohara.
Ity teknika ity dia nahomby tamin'ny fanandramana tamin'ny aretin'ny tarika mavo, ny pesta fotsy ary ny aretin'ny tarika fotsy. Raha io fomba fiasa io no ampiasaina, dia tokony hatao amim-pitandremana tsara mba hisorohana ny fihanaky ny cyanobacteria sy ny zavamiaina bitika hafa avy amin'ny haran-dranomasina marary mankany amin'ny haran-dranomasina manodidina. ref Nahomby ihany koa ny fanesorana ny tapany marary amin'ny fitsaboana aretina haran-dranomasina sasany.
Noferan'ny mpitantana ny fidirana amin'ireo toerana misy aretina avo lenta amin'ny tanjona hampihenana ny fifindran'ny toerana tsy misy fiantraikany. Paikady iray hafa dia ahitana ny fanaraha-maso ireo anton-javatra izay mampitombo ny aretin'ny haran-dranomasina toy ny sedimentation sy ny fihenan'ny kalitaon'ny rano. ref
Ny fampiharana ireo tetika ireo dia mitaky fikarakarana araka ny tokony ho izy ny vato harana marary, ny fampihenana ny fivezivezena eo amin'ny toerana fitsirihana, ary ny fifindran'ny toerana tsy misy otrikaretina fotsiny mankany amin'ny toerana voan'ny aretina. ref
Misy tambajotran'ny mpahay siansa sy mpitantana mahafoy tena sy mahafeno fepetra azo ifandraisana amin'ny fanampiana, fampahalalana ary torohevitra. Ohatra, ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Aretina ary Consortium Health (CDHC) dia noforonina ho ezaka fiaraha-miasa mampifandray ireo solontena avy amin'ny masoivoho amerikana mandray anjara amin'ny fitantanana ny haran-dranomasina.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitsaboana momba ny aretina mikraoba: Torolàlana ho an'ny fanombanana, fanaraha-maso ary fitantananamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoToro-làlana momba ny famotopotorana ny fahasitranana amin'ny areti-masomanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSarintany lehibe momba ny aretina mikraoba sy aretina voajanaharymanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDrafitra fanatanterahana aretina amin'ny Repoblika Dominikaninamanokatra fisie PDF